Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba ezizii-Hong Kong » Ndwendwela iHong Kong ukuze ukhuselwe nguMdaniso weJellyfish
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba ezizii-Hong Kong • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Njengamava olwandle asembindini wokuqala waseHong Kong, i-Cube O Discovery Park ayibonisi nje kuphela umhlaba ongaphantsi kwamanzi kunye nobomi baselwandle ngendlela entsha, kodwa ikwagcina ulwandle ngobunono kwindawo encinci yeekyubhi ezisa ulwandle kufutshane kwaye ludibanise iindwendwe kwindalo ngeendlela ezintsha nezonwabisayo.
Ukugubungela indawo engaphezulu kwe-10,000 yeenyawo, iCube O Discovery Park iya kudibanisa indalo yemiboniso yobomi baselwandle kunye nemidlalo ye-multimedia enomdla, kunye nolonwabo, imfundo kunye namathuba okutya.
Ilungele ukutyelelwa kosapho kunye neefoto zemithombo yeendaba zentlalo, iCube O ikwindawo enkulu yemall Plaza 88 eTsuen Wan kwaye yindawo yokuqala yamava olwandle yaseHong Kong embindini wedolophu.
ICube O yiprojekthi yokuqala eHong Kong esuka kwiCube Oceanarium- uphawu oludumileyo lwe-aquarium- kwaye sisiphumo sentsebenziswano ephumelelayo phakathi komyili we-aquarium ephezulu, iqela elisebenza ngokuloba i-aquarium, umcebisi ophezulu wolondolozo lwaselwandle kunye nomcebisi wezobuchwephesha uphumelele amabhaso amabini aBalaseleyo eziBonakalayo kwiiMbasa zeFilimu zaseHong Kong.
Xa undwendwela Hong Kong kwakhona emva kokuvula kwakhona, iCube O kufanele ukuba ibe kuluhlu lwakho lwamabhakethi
Umbono emva kweCube O kukudala amava awodwa olwandle anelizwe elingaphantsi kwamanzi kunye nobomi baselwandle bokwenyani, ngokudityaniswa neziphumo zokunxibelelana kwimultimedia, ukukhuthaza umyalezo wokhuselo lwaselwandle
Amava olwandle alo lonke usapho
ICube O yahlulwe yangamacandelo aliqela anezinto ezinomtsalane ezahlukeneyo kubandakanya ingqikelelo ye-acrylic yokuqala ye-acrylic. Oku kudibanisa umbono wobomi baselwandle bokwenyani kunye neprojekthi yokukhanya kunye nesithunzi. Umzekelo, i-jellyfish iboniswa kwi-kaleidoscope yemibala, ngelixa i-Virtual Reality (VR) ithatha iindwendwe kuhambo oluya kulwandle olunzulu.
Kukho igumbi lokufundela leJellyfish eliyiMixed Reality (MR), indlu yokudlala yabantwana, kunye nendawo yokutyela. Amava amnandi anika usuku oluhle olujolise kusapho, kunye nendawo efanelekileyo ye-Instagrammable yabantu abancinci.
Ukutyhila ummangaliso wolwandle
Ngokudibanisa ubomi bokwenene baselwandle kunye nokukhanya kwezobugcisa kunye neziphumo zethunzi eziguqula i-jellyfish ecacileyo ibe yimbonakalo yombala webhola, iCube O inethemba lokonwabisa abantu ngobungangamsha bolwandle. I-jellyfish edanisayo ibonakala ngathi iyabandakanyeka kwi-ballet yolwandle engaphantsi kolwandle kwaye yenza amathuba okungaqhelekanga eefoto kubakhenkethi.
Itekhnoloji yokusebenzisana ye-multimedia iyakwenza ukuba iindwendwe ziqwalasele ubomi baselwandle kufutshane kwaye zifunde ngakumbi ngendalo, ukhuselo lwendalo esingqongileyo, kunye neendlela zokuphila ezizinzileyo. Iziphumo ezibonakalayo ezintle ziya kudala imvakalelo yokusiwa kumhlaba wolwandle omangalisayo ogcwele iimbono ezimangalisayo.
I-kaleidoscope yeendawo ezingenasiphelo zefantasy
I-jellyfish kaleidoscope ngokufihlakeleyo idibanisa imifanekiso ye-jellyfish yokwenyani, enesithunzi sesipili, ngelixa izibane ezinemibala zibonisa izithunzi ezininzi ze-jellyfish kuwo onke amacala. Oku kudala indawo engaqondakaliyo apho iindwendwe ziya kuziva ngathi zitshisiwe ngokupheleleyo.
Emva koko, iindwendwe zingandwendwela iziko lophando lwe-jellyfish kwaye zifunde ukuba i-jellyfish ikhula njani ukusuka kwiintsana ziye kubantu abadala kwaye ifumanise ngakumbi malunga ne-jellyfish ecology kunye neempawu zeentlobo ezahlukeneyo ze-jellyfish. Ukongeza ekubukeni ukutya kwe-jellyfish, iindwendwe ziya kuvunyelwa ukuba zinxibelelane nabo ukusuka kwindawo ekhuselekileyo yomgama kwaye ke basondele elwandle.
Imidlalo yokunxibelelana yemultimedia iya konyusa amava onke, njengoko iindwendwe zinokuthi "zibe" yintlanzi encinci, zidade phantsi kokhuseleko lwejellyfish kutyelelo lokuhlola ulwandle. "Intlanzi encinci" kufuneka ifihle phantsi kwe-jellyfish ngelixa ilumkele ukubanjwa ziintente okanye ukuhlaselwa ngamarhamncwa abalalele kufutshane.
Kwigumbi lokufundela le-MR jellyfish, iindwendwe zinokuba "ngabagcini bolwandle" kwaye zihlangule ufudo lwaselwandle oluluhlaza, olufuna unyango ngononophelo kunye nomzamo omkhulu wokunceda ufudo lubuye lubhukude lubuyele elwandle.
Umsebenzi wokuhlangula ulandela iinkqubo zohlangulo lokwenene lofudo. Iindwendwe ezithatha inxaxheba ziya kuba nakho ukufunda ngomsebenzi wobungcali bolondolozo lwendalo, bacinge ngempembelelo yabantu elwandle, kwaye bafumane umbono wokuthunywa ngokubhekisele kulondolozo lwaselwandle.
Intsapho enolwandle indlu yokudlala kunye neenkwenkwezi ezintlanu zokutyela
Indawo yokudlala yabantwana inendawo yokudlala yokuqala yolwandle yaseHong Kong apho abantwana banokufumana ulwazi lwaselwandle ngelixa bonwabile ngokuqonda imiceli mngeni yomzimba.
Iindonga ze Playhouse zipeyintwe ngepeyinti elungele abantwana ukwenza imeko-bume ecocekileyo nenempilo, ke abazali banokutya ukutya okumnandi okufuphi benoxolo lwengqondo.
Ipaki imeme uMpheki oyiNtloko kunye neqela lakhe kwihotele eneenkwenkwezi ezintlanu ukulungiselela ukutya okuluncuthu. Ukongeza, iCorner Cone, uphawu oludumileyo lwase-ice cream lwaseAsia, ilungiselele uluhlu lwamaqweqwe olwandle olulinganiselweyo ngakumbi kwiCube O. Ioyile yeoyile ekhethekileyo ibonelela ngokukodwa amathuba emifanekiso yemidiya yoluntu.
ICube O ijolise ekukhuthazeni abantu abaninzi ukuba bahloniphe kwaye bakhusele abemi bolwandle kwaye bathathe inxaxheba kulondolozo lwaselwandle, ngokuzonwabisa kunye nokuncoma iimbono ezintle zobomi baselwandle, ukujonga iimpawu zabo, kunye nokungena ngengqondo kwilizwe elingaphantsi kwamanzi ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisana imidlalo.
Ityhubhu O yenzelwe ukuba ibe yindawo yolonwabo, ukuphumla, kunye nemfundo yabantu kunye neentsapho, kunye namaqela esikolo anokufumanisa ukwahluka kobomi elwandle ngokuzibandakanya okuzibandakanya.
n 2021, yayi dweliswe njenge-5th Eyona ndawo yolwandle eyi-aquarium kwihlabathi ngokuBekwa kwiWebhusayithi yeeNdawo zeHlabathi kunye nenqanaba le-16th kukhetho lweendawo ezingama-50 ezilungileyo kwiwebhusayithi yeSkena seTyelelo.